के हो ‘ब्ल्याक होल’ ?, वैज्ञानिकहरु भन्छन्–‘सूर्य, पृथ्वी सबैलाई निल्न सक्छ’
Published: July 31, 2015 20:43 PM
काठमाडौं । ‘ब्ल्याक होल’ । अन्तरिक्षमा जे–जति र जसलाई पनि आहारा बनाउने र जति खाए पनि नअघाउने ‘अन्तरिक्षको एक दानव’का रुपमा परिचित ।त्यसले आफू नजिक आएका तारा, ग्रहलगायत अन्तरिक्षका सबै वस्तुहरु, यतिसम्म कि प्रकाशलाईसमेत निलिदिन्छ भन्छन् वैज्ञानिकहरु । अनि, पृथ्वीलगायत अन्य सबै ग्रहहरु पनि ब्ल्याक होलको मुखमा...
यसरी रहयो चार करोड ७० लाख बर्ष पुरानो जीवावशेषको नाम
Published: July 28, 2015 13:17 PM
काठमाडौं, श्रावण १२ । बैज्ञानिकहरुले हालै मानव पुर्खासंग नाता भएको करिब ४ करोड ७० लाख बर्ष पुरानो जीवावशेषलाई त्यसका अनुसन्धानधाता डा.जोर्न हुरुमकी छोरी ईडाको नामबाट इडा भनी नामाकरण गरिएको छ । यसअघिसम्म पूर्वी अफ्रिकामा फेला पारेको लुसी नामको मानव जीवावशेष नै सबैभन्दा पुरानो मानव पुर्खाको रुपमा मानिंदै आएको...
‘ग्रेटवाल अफ चाइना’बारे नयाँ रहस्य खुल्यो
Published: July 22, 2015 18:27 PM
काठमाडौं, श्रावण ६ । अन्तरिक्षबाट देखिने पृथ्वीको मानवनिर्मित संरचना चीनको ‘ग्रेटवाल’का बारेमा अन्वेषकहरुले नयाँ तथ्य फेला पारेका छन् ।ग्रेटवालको लम्बाई पाँच हजार किलोमिटर भनी यसअघि नै अनुमान गरिएको थियो । तर, वैज्ञानिक ढंगले नापजाँच गरिएको थिएन । चीन सरकारले सन् २००५ देखि ग्रेटवालसम्बन्धी अध्ययन गर्न नयाँ दल गठन गरी अनुसन्धान...
अन्तरीक्षमा कसरी पुग्यो पहिलो पटक जीव ?
Published: July 17, 2015 16:32 PM
काठमाडौं, श्रावण १ । दोस्रो बिश्वयुद्धपछि अमेरिका र रुसबीच अन्तरीक्ष अनुसन्धानमा आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो । यसै क्रममा रुसले मानव इतिहांसमै सवैभन्दा पहिले अक्टोवर ४ सन् १९५७ मा स्पुत्निक १ नामक कृत्रिम भू उपग्रह अन्तरीक्षमा पठाई अन्तरीक्ष यात्राको ढोका खोलेको हो । ...
यो हो, अन्तरिक्षमा बाँच्न सक्ने जीव, यस्तो छ विशेषता
Published: July 16, 2015 15:44 PM
काठमाडौं, आषाढ ३१ । केही समयअघि वन्यजन्तु तथा प्रकृतिको बारेमा बृत्तचित्र प्रसारण गर्ने चर्चित टिभी च्यानल ‘एनिमल प्लानेट’ले वातावरणको चरम अवस्थामा पनि बाँच्न सक्ने १० प्राणीहरुको ‘काउन्ट डाउन’मा पहिलो नम्बरमा समुद्री जीव ‘टार्डिग्रेड’ पर्‍यो ।अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको टोलीले हालै गरेको अनुसन्धानअनुसार...
नेपालमा महिलाहरुले काँध थापी घाटसम्म पुर्‍याएको पहिलो शव पारिजातको, केही जानकारी
Published: July 16, 2015 15:30 PM
नेपालको इतिहासमा ‘पारिजात’को शव नै पहिलो शव हो, जसलाई महिलाहरुले काँध थापी घाटसम्म पुर्‍याएका थिए । विश्वमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रसँग सीमाना जोडिएको राष्ट्र हो, चीन । जसका १३ राष्ट्रसँग सीमाना जोडिएको छ । सबैभन्दा पहिले चिट्ठाको उत्पत्ति युरोपबाट भएको थियो । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटानको राष्ट्रिय...
सबैभन्दा लामो नाक हुने जनावर हात्ती, जान्नुस् जनावरसम्बन्धी रोचक जानकारी
Published: July 16, 2015 15:26 PM
एक पटकमा ४०–५० देखि ९० ओटासम्म बच्चा पाएर मर्ने जीव हो, ‘विच्छी’ । सबैभन्दा अग्लो जनावर जिराफ हो । जसको उचाई ६ मिटर अग्लो हुन्छ । सबैभन्दा बढी बाँच्ने जनावर कछुवा हो । यसको आयु २०० वर्षसम्म हुन्छ । ...
यो हो ‘दैत्य जीव’, पढ्नुस् यसबारे रोचक जानकारी
Published: July 13, 2015 17:24 PM
काठमाडौं, आषाढ २८ । प्राचीनकालमा समुद्र र महासागरहरुमा यात्रा गर्दा जहाजबाटै मानिसहरु हराउने गरेको इतिहास छ ।कहिले–काँही समुद्रभित्रबाट लामा–लामा हातहरु फैलाइ जहाजमा रहेका मानिसहरुलाई कुनै अज्ञात जीवले तानेको डरलाग्दो दृष्य जहाजमा यात्रा गर्नेहरुले देख्ने गर्दथे । त्यस समय ‘समुद्रमा दैत्यहरु हुन्छन्’ र ‘तिनीहरुले...
कसरी गरियो विमानको आविष्कार ? यस्तो छ तथ्य
Published: July 12, 2015 10:35 AM
काठमाडौं, आषाढ २७ । आकाशमा उड्ने कल्पना कहिलेदेखि गरे होलान् र प्रयोगात्मक रुपमा कसले सर्वप्रथम उड्न सक्ने मानव निर्मित बस्तुको कल्पना गर्‍यो होला भन्ने वास्तविकता आजसम्म खुलेको छैन । त्यसैले आधुनिक भौतिक बिज्ञानले ओर्भिल राइट र विल्भर राइटलाई इन्जिनियर सहितको बिमानको बिकास गर्ने प्रथम अन्वेषक हुन् भनेर मानेको...
माछा मनपर्छ ? स्वास्थ्यका लागि माछा ‘फाइदाजनक’
Published: July 10, 2015 16:18 PM
काठमाडौं, आषाढ २५ । माछा खानु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक भएको वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । उनीहरुका अनुसार माछा खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुनुको एउटै कारण माछामा पाइने ‘ओमेगा ३’ नामको बोसोयुक्त ‘एसिड’ हो ।‘ओमेगा ३’ मानव शरीरमा भएका सम्पूर्ण कोषहरुको झिल्लीको निर्माण र गतिविधिहरुमा सक्रिय भूमिका रहने...
मानव शरीरका अंगहरुको बनावटबारे पढ्नुस् केही रोचक जानकारी
Published: July 9, 2015 11:45 AM
काठमाडौं, आषाढ २४ । हाम्रो प्रत्येक खुट्टामा २६ ओटा हड्डीहरु, ३३ ओटा जोर्नीहरु, र १९ ओटा मांसपेशीहरु हुन्छन् । पैतालाको छाला शरीरका अन्य भागहरुमा भन्दा बढी बाक्लो हुन्छ । पैलालामा १ लाख २५ हजार पसिना ग्रन्थीहरु हुन्छन् । जुन प्रतिवर्ग इन्चको दरले शरीरको अन्य कुनै पनि भागमा हुने पसिनाग्रन्थीहरुभन्दा बढी हो ।अति नाजुक र सुक्ष्म कामदेखि शक्तिका...
यस्तो छ, चराको प्वाँखको कहानी
Published: July 9, 2015 11:28 AM
काठमाडौं, आषाढ २४ । जीव शास्त्रीहरुका अनुसार हालसम्म ब्विश्वमा चरामा मात्र प्वाँख पाइएको छ भने अन्य जीवमा छैन । ९६ प्रतिशतभन्दा केही बढी चराहरुमा एकभन्दा बढी किसिमका प्वाँखहरु हुन्छन् ।हामीले झलक्क देख्दा चिल्लो जस्तो देखिने प्वाँख आवरणपत्र हो । त्यसले चरालाई रुप र आकार दिएको हुन्छ । यसलाई ‘कन्टोर फेदर’ पनि भनिन्छ । यी पखेटा...
यस्ता छन्, संसारमै सबैभन्दा ‘सुरक्षित’ सहर
Published: July 9, 2015 09:52 AM
काठमाडौं, आषाढ २३ । विश्वका पाँचओटा सहर संसारका सबैभन्दा सुरक्षित सहरमा नामांकित भएका छन् । विश्वका यी यस्ता पाँच सहर हुन्, जहाँ कुनै रेस्टुराँ, होटेल वा पर्यटकीय स्थलमा कुनै सामान बिर्सेमा पनि सुरक्षितपूर्वक फिर्ता पाइन्छ ।जापानको ओशाका सहर विश्वका सुरक्षित मध्येको एक सहर हो । यहाँका कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा आफ्नो पैसासहितको ब्याग छाडेर...
किन झर्छ आँशु, के छ रहस्य ?
Published: July 7, 2015 10:03 AM
काठमाडौं, आषाढ २२ । आँशु किन झर्छ ? यो किन हाम्रो शरीरमा हुन्छ ? आँशुले हामीलाई के फाइदा गर्छ ? यस्ता प्रश्नहरु हामी धेरैको मनमा उठ्न सक्छ । अर्थात् यो हाम्रो जिज्ञासाको बिषय पनि हो । आँशु भनेको हाम्रो शरीरमा हुने नुनिलो तरल पदार्थ हो । हाम्रो आँखालाई कोर्निया नामक एउटा पातलो...
‘विश्वभरका समुद्री जीवहरु खतरामा’
Published: July 6, 2015 17:10 PM
काठमाडौं, आषाढ २१ । अनियन्त्रित कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनका कारण विश्वभरका समुद्री जीवहरु खतरामा रहेको तथ्य खुलेको छ ।‘साइन्स जर्नल’मा हालै प्रकाशित तथ्यांकमा महासागरको पानी निकै नै तातिएको र अक्सिजनको कमीका कारण समुद्री जीवहरुको अस्तित्व खतरामा परेको विशेषज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।विश्वभरका २२ जना प्रख्यात वैज्ञानिकहरुको...